Inona ny Hanukkah na Hanukah?
Fivavahana & Spirituality Fianakaviana manan-danja
Inona ny Hanukkah?
Ireo rehetra momba ny fetin'ny jiosy tao Hanukkah (Hanukaka)
Hanukkah (indraindray antsoina hoe Chanukah) dia fety jodiana nankalazaina nandritra ny valo andro sy alina. Manomboka amin'ny faha-25 amin'ny volana jivan'i Kislev izany, izay mifanandrify amin'ny faran'ny volana Novambra-Desambra lasa teo amin'ny kalandrie tsy ara-dalàna.
Amin'ny teny hebreo, ny teny hoe "hanukkah" dia midika hoe "fanoloran-tena." Ny anarany dia mampahatsiahy antsika fa io fialantsasatra io dia hankalaza ny fanokanana ny tempoly masina tany Jerosalema taorian'ny fandresen'ny Jiosy ny Grika syrianina tamin'ny taona 165 TK
Ny tantaran'i Hanukkah
Tamin'ny 168 TK dia nosamborin'ny miaramila Syriana sy Grika ny tempolin'ny Jiosy ary natokana hanompo an'i Zeosy andriamanitra. Nahatezitra ny vahoaka jiosy izany, saingy maro no natahotra niady noho ny tahotra ny famaizana. Avy eo, tamin'ny 167 TK, dia notanterahin'i Antiokosa, mpanjaka grika syrianina, ny fanamelohana ny Jodaisma ho faty izay nanasazy azy. Nandidy ny Jiosy rehetra koa izy mba hivavaka amin'andriamanitra grika.
Ny fanoherana jiosy dia nanomboka tao amin'ny tanànan'i Modiin, akaikin'i Jerosalema. Ireo miaramila grika dia nanangona ny tanàna jiosy ary nanery azy ireo hiankohoka amin'ny sampy, avy eo dia mihinana kisoa-ireo fanao izay voarara amin'ny Jiosy. Nisy manam-pahefana grika nandidy an'i Mattathias, Mpisoronabe, mba hanaiky ny fangatahany, fa tsy nety i Mattathias. Rehefa nisy mpiray tanindrazana hafa nanatona sy nanolo-tena hiara-miasa amin'i Mattathias, dia tezitra mafy ilay Mpisoronabe. Nosintoniny ny sabany ary novonoiny ilay mpizahatany, dia nitodika ilay manamboninahitra Grika ary namono azy koa.
Ireo zanany lahy dimy sy ireo mponina hafa dia nanafika ireo miaramila sisa tavela, namono azy rehetra.
Niafina tany an-tendrombohitra i Mattathias sy ny fianakaviany, ka nisy Jiosy hafa naniry hiady tamin'ny Grika hiaraka amin'izy ireo. Nahavita nanitsy ny taniny tamin'ny Grika izy ireo tatỳ aoriana. Ireo mpikomy ireo dia nanjary fantatra ho Makabeo, na Hasmoneana.
Rehefa niverina indray ny Makabeo dia niverina tany amin'ny Tempolin'i Jerosalema izy ireo. Tamin'io fotoana io dia nandoto ny ara-panahy izy ireo tamin'ny fampiasana ny fivavahana amin'ny andriamani-kafa ary koa amin'ny fanao toy ny kisoa mamono. Ny miaramila jiosy dia tapa-kevitra ny hanadio ny Tempoly amin'ny fandoroana menaka fanao amin'ny menoran'ny tempoly nandritra ny valo andro. Saingy ho sahiran-tsaina izy ireo, nahita fa iray andro monja ny solika sisa tavela tao amin'ny Tempoly. Namela ny lehilahy izy ireo ary, tamin'ny fientanam-pony, dia nitohy ny valo andro.
Izany no fahagagan'ny menaka Hanukkah izay ankalazaina isan-taona rehefa jeren'ny Jiosy ho menoraha manokana fantatra amin'ny hoe hanukkiyah nandritra ny valo andro. Ny labozia iray dia nandrehitra ny alina voalohany tao Hanukkah, roa tamin'ny faharoa, sy ny sisa, mandra-pahatapitr'ireo labozia valo.
Hanamarika an'i Hanukkah
Araka ny lalàna jiosy, Hanukkah dia iray amin'ireo fialan-tsasatra jiosy tsy dia manan-danja. Na dia izany aza, lasa malaza kokoa i Hanukkah amin'ny fanao amin'ny andro maoderina satria akaiky ny Krismasy.
Nanomboka tamin'ny faha roapolo amby roapolo volana jivan'i Kislev i Hanukkà. Satria ny volana jordanina dia miorina amin'ny volana maromaro, isan-taona dia mianjera amin'ny andro hafa ny andro voalohany an'i Hanukkah - matetika eo anelanelan'ny volana Novambra sy ny faran'ny Desambra.
Satria Jiosy maro no monina ao anatin'ny fiarahamonina kristiana lehibe indrindra, dia nanjary lasa fety kokoa sy Krismasy tahaka izao i Hanukkah. Nahazo fanomezana ho an'i Hanukkah ny ankizy jiosy - matetika no fanomezana iray isaky ny valo alina amin'ny fialantsasatra. Maro ny ray aman-dreny manantena fa amin'ny fanolorana manokana an'i Hanukkah, ny zanany dia tsy hahatsiaro ho tafavoaka amin'ny fety fankalazana Krismasy manodidina azy ireo.
Ny fikambanana tsirairay dia manana ny traditions Hanukkah tokana, saingy misy fomban-drazana izay efa zatra manerana izao tontolo izao. Izy ireo dia: manazava ny hanukkiyah , mihodina ny sakafom-bary ary mihinana sakafo matsiro .
Manazava ny hanukkiyah: Isan-taona dia mahazatra ny fahatsiarovana ny fahagagan'ny Hanukkah amin'ny alàlan'ny famokarana labozia ao hanukkiyah . Ny hainkkiyah dia mandrehitra isan'alina amin'ny valo alina.
Miresaka momba ny tsy fitovian-kevitra: Ny lalao malaza Hanukkah dia mamelatra ny fandrika, izay misy teboka efatra miaraka amin'ny litera hebreo nosoratana tamin'ny lafiny tsirairay. Ny Gelt, izay volam-bozaka madinidinika boribory, dia ampahany amin'ity lalao ity.
Mamy sakafo matsiro: Satria mankalaza ny fahagagan'ny menaka i Hanukkah, dia mahazatra ny mihinana sakafo matsiro toy ny latkes sy sufganiyot mandritra ny fialantsasatra. Latkes dia mofomamy vita avy amin'ny ovy sy ny tongolobe, izay mofomamy amin'ny solika ary avy eo manompo amin'ny applesauce. Sufganiyot (singiolary: sufganiyah) dia donc de fofomamy vita amin'ny jelly izay mofomamy ary indraindray dia vovoka amin'ny siramamy siramamy alohan'ny hisakafo.
Ankoatra ireo fomba amam-panao ireo, dia misy ihany koa fomba maro mahafinaritra hankalazana an'i Hanukkah miaraka amin'ny ankizy .
Feno Paska any Israely sy ny Diaspora
Ny 8 zava-dehibe indrindra momba an'i Rosh Hashanah
Ny Tantaran'i Pourima
Ny Rosh Hashanah sy i Yom Kippur mahaliana
Paska: Ny sakafo voarara
Inona moa i Rosh HaShanah?
Fifadian-kanina, fety ary fombafomba fanao amin'ny Purim jiosy
Vashti ao amin'ny Baiboly
Inona ny Kol Nidrei?
Ny pasiteranao Seder mba hitarika
Inona no atao hoe Yom Kippur?
Lecrae Moore Biographie
Jereo ny tranonkala amin'ny teny espaniola automatique
Te hahafantatra hoe ahoana no nahatonga ny kintana mainty ho an'ny kintana? Mangataha Computer!
Battle of the River Plate - Ady amin'ny ady lehibe faharoa
8 Torohevitra momba ny fianarana italiana dia tsy heno amin'ny sekoly ianao
Fahatakarana ny fako sy ny fomba hisorohana azy
Fijerena ny Tantara sy ny Jeografia any Nouvelle Zélande
Ny fomba hanoroana ny rahona amin'ny pensily
Ny fiantraikany amin'ny Coattail amin'ny politika
Ahoana no hamoronana loko matevina amin'ny sary hosodoko Acrylic
Fomba hanatsarana ny fahaizanao ny pocket, ampahany I
Misy bokin-tsarimihetsika na bokin-dahatsoratry ny mpangalatra ao amin'ny zaridaina?
Inona no karazana angatra aminao?
Fantaro hoe inona no fanatsarana ny Virus
Viking 1 sy Viking 2 ho an'ny Mars
Sary mihetsika dimy amin'ny Acid Trip
Ady tamin'ny 1812: Battle of Chateauguay
Ny fampiasana ny 'Ir'
Famaritana ny matoanteny 'Skier' ('mankany ski')
Torolalana tsotra momba ny fomba ahafantarana ireo mpianatra fototra
10 Zavatra Manan-tsahala Ho Antsika
The Mythology Greek - Bible vs. Biblos
Ny fiaraha-mikorana kristiana tsara indrindra
Fifandraisana am-piasana eo amin'ny toeram-piasana ho an'ny mpianatra ESL
Ny Album-n'ny Rock izay tsara indrindra amin'ny taona 1990
Melkisedeka: ny mpisoron'Andriamanitra Avo Indrindra